Ny tsiroaroa vola - Best Forex EA ny | Expert Advisors | FX Robots
HomeForex Schoolvola Ny tsiroaroa
Forex foana amidy tsiroaroa.
Isaky ny mahita ny fanakalozam-bola ny tahan'ny, dia kay no vola mpivady toy ny EUR /USD. EUR/USD manondro vola roa: ny Euro sy Dollar US.
Ity ny Pikantsary ny vola tsiroaroa aseho ao an-tsena fiambenana varavarankelin'ny Metatrader:
Base Sandam-bola Ary Quote Sandam-bola
Ny vola voalohany ny vola mpivady no antsoina hoe ny "fototra vola", raha ny faharoa dia antsoina hoe "notsongaina vola", ary matetika izy ireo tafasaraka amin'ny iray nandroso tavy ( "/").
Ny fototra lehibe indrindra vola dia:
Ny base vola 1 sarobidy foana, ohatra, 1 Dollar, 1 Pound, 1 Euro, etc.
Ny kajy dia: 1 rafitra ny Base Sandam-bola nividy X vondrona ny Quote Sandam-bola.
Raha ny tena ratsy dia USD vola, toy ny USD / JPY, dia notsongaina ny USD / JPY 88.48 dia midika fa iray US dolara no mitovy ny 88.48 Yen Japoney. Raha ny tena ratsy dia EUR vola, toy ny EUR / USD, dia ny notsongaina avy 1.3980 dia midika fa Euro iray dia mitovy 1.3980 US dolara.
A mpivarotra mividy ny vola mpivady raha mino ny fototra vola hitsangana mikasika ny notsongaina sandam, na mivarotra ny vola mpivady raha mino ny fototra vola dia hampihena mikasika ny notsongaina sandam.
Ohatra, andeha hojerentsika ny EUR / USD, izay Euro dia sandam-bola ary noho izany dia ny "fototry" ho an'ny varotra / amidy. Raha mino ianao fa ny krizy amin'ny alàlan'ny trosa Eurozone dia handresy ny euro amin'ny farany, hamidy ny EUR /USD. Efa nivarotra euro ary manantena fa ho raiki-danja manohitra ny US dolara.
Fanamarihana: Forex varotra tafiditra ny niara fividianana ny iray vola sy ny fivarotana ny iray hafa ao amin'ny mpivady. Noho izany, rehefa mividy vola mpivady, ianao mividy ny fototra vola sy hivarotra ny notsongaina vola.
Ampandehano Ary Anontanio Prices
Ny mpivarotra vola dia matetika amidy sy vidy miaraka amin'ny vidin'ny "bid" ary "manontany".
The "Dia asao" dia ny vidiny amin'ny izay afaka mivarotra base vola / hividy notsongaina vola. The "Mangataka" dia ny vidiny amin'ny izay afaka mividy ny fototra vola / mivarotra notsongaina vola. Ho hitanao fa ny mangataka foana vidiny ambony kokoa noho ny firotsahany hofidiana vidiny.
niely dia ny fahasamihafana eo amin'ny tolotra sy ny vidin'ny fangatahana (Fielezan'ny = Manontany-Ampandehano).
Ny fanalahidin'ny fahombiazana ara-barotra dia miankina amin'ny fifidianana iray na roa tsiroaroa ny vola izay maniry ny varotra toy ny mpanao voalohany. Rehefa mahazo matoky ianao, dia mety maniry ny hametraka bebe kokoa eo amin'ny varotra tsiroaroa ny portfolio. Fa ho vaovao mpivarotra na ny mpampiasa vola izany foana Nanoro hevitra ny varotra amin'ny voafetra isan'ny tsiroaroa tsotra fotsiny mba ho azo antoka.
Ny valo tena matetika varotra vola (USD, EUR, JPY, GBP, CHF, CAD, NZD sy AUD) Antsoina hoe ny lehibe vola, ary ny hafa rehetra vola no antsoina hoe tsy ampy taona, satria milalao kely ny anjara asa sy ny tsy dia rano.
Ny Major Ny tsiroaroa ireo fotsiny ny vola lehibe fito miaraka tsiroaroa amin'ny USD. Izy ireo kaonty mahery 70% rehetra Forex po:
Etazonia Euro-dolara ihany
USD / JPY 17% Etazonia/
Japana Dolara-Yen ihany
GBP / USD 14% Fanjakana mitambatra/
Etazonia Sterling-dolara Sterling
USD / CHF 9% Etazonia/
Soisa Dolara-Swiss Swissy
USD / CAD 5% Etazonia/
Kanada Dolara-Kanada Loonie
Etazonia Australian-dolara Aussie na
NZD / USD 4% Novely zelandy/
Etazonia Nouvelle Zélande-dolara kiwi
Mariho ary Soso-kevitra
Mariho ny Anarana sy ny solon Sandam-bola:
Vola sy ny solon 'anarana dia mety ho mampisafotofoto rehefa mihaino ny Forex tsena fanehoan-kevitra, na manao Forex tsena fikarohana, ka tandremo tsara ny manavaka raha ny mpanoratra na ny mpandalina dia manondro ny olona vola, na ny vola mpivady.
Soso-kevitra amin'ny Fantatr'i Difference amin'ny Nickname Usage:
Raha ny fanadihadiana amin'ny banky lehibe iray manoratra ny tatitra milaza fa ny Kanadiana dolara no hampatanjaka amin'ny hoavy, ny fanehoan-kevitra tsirairay dia manondro ny vola, amin'ity tranga ity ny CAD, milaza fa ny USD /CAD Hanosika ambany (USD malemy kokoa / CAD matanjaka kokoa). Na izany aza, raha ny fanehoan-kevitra dia toa manondro fa ny Dollar-Kanada na Loonie dia hanamafy orina amin'ny hoavy, dia manondro ny sandam-mpivady, ary oharina amin'ny forecast fa ny USD /CAD Hanosika ambony (USD matanjaka / CAD malemy kokoa).
Mijoroa ao an-tsaina fa ny ara-toekarena sy ara-politika matanjaka miovaova vola ao ambony tinady noho ny vola tsy milamina monina any amin'ny faritra.
Nahoana no ireo ny Major Fito Ny tsiroaroa?
Izany rehetra dia mifandray amin'ny boky. Ireo no mavitrika indrindra nahatonga (varotra) vola eto amin'izao tontolo izao. Ny paring dia manan-danja sy ny varotra ny fitambaran'ny boky ho an'ny tapitrisa tapitrisany dolara isan'andro. Ireo amin'ny ankapobeny ny tena sahaza ho an'ny varotra tsiroaroa, indrindra fa ho an'ny mpanao voalohany mpivarotra. Misy antony maro, nanomboka tamin'ny ambany Niely izay hita ao amin'ny tsiroaroa ireo. Ny ranon-javatra kokoa ny vola mpivady dia, ny ambany ny niely matetika izany.
Inona no niely? Raha jerena ankapobeny ny fihanaky no maha samy hafa ny 'dia asao' sy ny 'mangataka' vidiny, na amin'ny teny hafa, izany no mahazo ny brokerages naniraka. Ny mahazatra manitatra eo amin'ny mpivady lehibe iray eo anelanelan'ny pip sy telo pips (indraindray na dia maherin'ny efatra pips). Izany no eo amin'ny fahendren'ny ny broker voalohany indrindra, fa mifandray akaiky amin'ny tena ihany koa ny liquidity ny roa, araka ny voalaza.
Inona no Zava-dehibe ny fito ireo Major Ny tsiroaroa?
Lehibe fito ireo mpivady dia tokony ho ny hanombohana ny fahaizana mpivarotra mianatra tsara fotsiny Forex rafitra ara-barotra. Tsiroaroa ireo no hanome ny isan'ny lehibe indrindra fahafahana (varotra setups)-barotra nametraka ary mety tsara ho an'ny andro Forex varotra. Ny ankamaroan'ny Forex varotra rafitra no fahazoan-dalana hidirana ny mpianatra fa izy ireo varotra ireo tsiroaroa, ary marina izany. Misy mihoatra noho ny ampy ireo fahafahana lehibe fito tsiroaroa mba hamelomana manontolo andro mpivarotra.
Zava-dehibe iray hafa izay tokony ho foana ao an-tsaina dia ny ambony mpivady fito lehibe mazàna ny hamaly ny fanadihadiana ara-teknika tsara. Mety ho avo noho ny liquidity ireo mpivady izay mahatonga azy ireo bebe kokoa sy ny vidiny tsena mahomby nahita tsara kokoa.
Raha vao hahafehy telo na efatra amin'ireo tsiroaroa vola lehibe, dia mety ho fanaovana vola be. Ny ankamaroan'ny zavatra ao amin'ny forex tsena an'ny lehibe ireo tsiroaroa, toy ny 90% ny vola varotra mahakasika azy ireo. Noho izany dia tsara ny mijanona miaraka amin'ny majors.
Mariho manokana ny Sandam-bola fototra:
Ny mpivady forex roa lehibe dia mamaly hetsika isan-karazany ary mitaky fomba fiasa sy paikady tokana. Azafady araraoty ny pejinay antsoina hoe Fundamentals Currency Currency mba hahalalana bebe kokoa momba ny tsy fitovian'ny mpivady vola tsirairay.
Ny tsiroaroa kely (kely tsy fitoviana)
Mpanoratra ny vola sasany tsiroaroa no antokony efatra voalohany ihany ny vola toy ny majors tsiroaroa (EUR / USD, USD / JPY, GBP / USD, USD / CHF); danja ny telo ho any ny tsi-ny maha-tsy ampy taona mpivady (USD / CAD, AUD / USD, NZD / USD) noho ny tsy varotra boky be.
Ireo telo farany tsiroaroa vola ihany koa nahazo ny fanavahana ny hantsoina hoe tsiroaroa entam-barotra, satria ny toe-karena ny resaka fanondranana entam-barotra mifototra amin'ny harena.
Ny entam-barotra Currencies
USD / CAD: Dollar Kanada na Loonie
Ny tsiroaroa hafa izay nahazo ny toerana ny hantsoina hoe tsy ampy taona tsiroaroa no skandinavianina vola (USD / NOK, USD / DKK, USD / SEK).
The skandinavianina Currencies
USD / NOK: norvejiana Krone (Norway)
USD / DKK Malagasy Danish Krone (Danemark)
USD / SEK book Krona (Soeda)
Mariho amin'ny skandinavianina Currencies:
Ny tahiry Scandinaviana dia tena matanjaka nandritra ireo taona vitsy lasa, indrindra ny USD / NOK izay midina ao anaty tabilao (kisarisary malemy / Krone malemy) satria i Norvezy dia manana toekarena matanjaka izay lozam-pamoakàn'ny solika (izay mahatonga an'i NOK ho mahery vola entana).
Cross-Sandam-bola Ny tsiroaroa
Ny hazo fijaliana-vola mpivady, na lakroa, na lakroa ho fohy, dia misy vola mpivady izay tsy ahitana ny US Dollar.
Inona no antony ny barotra ny hazo fijaliana?
Antony # 1: voly hafa izay
Ny ankamaroan'ny vola varotra atao amin'ny dolara tsiroaroa, toy izany koa ny hazo fijaliana ho tsara foana ny safidy ho raharaham-barotra tany amin'ny US Dollar.
Antony # 2: Sandam-bola mikendry
Ny hazo fijaliana mba hahafahan'ny mpivarotra mikendry mivantana kokoa po ny olona manokana vola mba manararaotra ny vaovao na ny zava-nitranga. Ohatra, ny fikarohana dia mety milaza fa ny Euro manana olana goavana noho ny mpanjaka trosa olana (Gresy, Irlandy sy Portiogaly) ary fa efa voatendry ho tonga malemy. Mety hijery manodidina hanararaotra izany ary mety handinika fivarotana voalohany ny EUR / USD, fa dia milaza fa ny US Dollar dia tsy tsara kokoa intsony, satria ny Etazonia manana ny olana goavana trosa. Ny fikarohana dia mampiseho fa bebe kokoa Soisa manana toe-karena matanjaka be sy tsy trosa, ka manapa-kevitra ny hanararaotra izany amin'ny alalan'ny shorting EUR / CHF.
fanjakana mitambatra Euro-Sterling
Novely zelandy Euro-Aussie
GBP / JPY 4.7 Fanjakana mitambatra/
NZD / JPY 3.9 Novely zelandy/
GBP / CHF 5.2 Fanjakana mitambatra/
GBP / CAD 6.0 Fanjakana mitambatra/
GBP / AUD 4.4 Fanjakana mitambatra/
GBP / NZD 9.2 Fanjakana mitambatra/
Novely zelandy Sterling-Kiwi
Novely zelandy Aussie-Kiwi
* Ireo "fanaparitahana amin'ny mahazatra" ireo dia ny FXCM, nalaina tao amin'ny http://www.fxcm.com/forex-spreads.jsp, ary nalaina avy tamin'ny fampielezana antonony lanja ho an'ny vanim-potoana jona 1, 2011 ka hatramin'ny jona 30, 2011 . Ny fiparitaky ny mpivarotra tsirairay dia miovaova ary mety tsy marina toy ny famolavolana ny fiparitaky ny fiparitahana amin'ny alàlan'ny mari-pamantarana miparitaka tsara (toa an'i StatMonitor_1.1Phat- na FXRM Spread History) namboarina tamin'ny tabilao vola.
Lafiny ratsy To Trading ny lakroa:
Hantsana lalina manjaka # 1: High Fielezan'ny
Ny sasany tamin'ireo hazo fijaliana ambony manana niely avo. Ohatra, EURNZD manana mahazatra fihanaky ny 7.5 pips. Ampitahao izany niely avo ny iva niely efa hitanay ny majors. Tsiroaroa toy izany no ambony kokoa noho ny fiparitahan'ny ambany liquidity (vitsy mpivarotra raharaham-barotra izany).
Hantsana lalina manjaka # 2: Less Technical
Satria ny hazo fijaliana dia tsy varotra ho mafy toy ny majors, dia tsy mamaly ny fanadihadiana ara-teknika ihany koa. Ny maningana ho ity fitsipika ity dia EUR / JPY sy GBP / JPY, fa na dia izy ireo sy ny kitoatoa velively mikorontana kokoa noho ny EUR /USD ary ny GBP /USD.
Exotic Sandam-bola Ny tsiroaroa
Saika ny rehetra antsoina hoe vahiny vola izay mazàna avy-dalam-pandrosoana dia naka teny toy ny manohitra ny vola manohitra ny USD toy izao: USD / XXX XXX izay no ISO 4217 fehezan-dalàna ho an'ny vahiny vola (ohatra, USD / MXN). Ny ampahany lisitra ny ISO Laharana sy ny anaran 'ireo vola hafakely fahita indrindra manaraka manaraka ny abidia sy ny toerana ara-jeografika sokajy amin'ny alalan'ny.
Fanamarihana: Na dia ny vola vahiny tsy naka teny toy ny manohitra ny vola manohitra ny USD, dia mbola voatanisa matetika ny lehibe faharoa taorian'ny vola (ohatra, EUR / MXN), na dia misy foana ny maningana (ohatra, CZK / JPY).
Inona no anton'ny Trading The Exotics?
Antony # 1: Sexiness
Ny mpivarotra sasany dia voataona ho any exotika noho ny fironana ara-pananahana vahiny. Mety hihevitra ny tenanao ho olona "eto amin'izao tontolo izao" ianao ary tokony hivarotra tsena iraisam-pirenena. Toy izany dia mety mitady azy ianao broker izay nanolotra mpivady vola 100 nieritreritra fa mety mila izany ianao. Izany no antony malemy indrindra ary raha tsy fantatrao izay ataonao dia ho tavela ho sorena ianao.
Antony # 2: Firenena, Toekarena manokana
Ny exotics hahafahan'ny mpivarotra mba hanararaotra ny toe-javatra ara-toekarena ny firenena. Ohatra, mety efa tonga saina fa ny ankamaroan'ny firenena G7 no feno olana ara-bola sy ny trosa, ary te-isan-karazany eo an-vola ny firenena izay tena fiscally feo (ohatra, ela ny Shiliana Peso avy amin'ny fivarotana USD / CLP, ary fahari ny Singapore Dollar avy amin'ny fivarotana USD / SGD). Na, mety ho olona iray izay te-fohy ny vola ny firenena fantatrao fa manana olana goavana. Amin'izao fotoana izao, dia mety ho nijery ny fihenjanana any amin'ny tontolo Arabo, ary te fohy ny Ejiptiana Pound (EGP / USD), na ny Libyana Dinar.
Antony # 3: Business
Ny ankamaroan'ireo orinasa ireo vola ireo raharaham-barotra manao izany satria tsy maintsy. Sary an-tsaina maha-Hongroà fanorenana mafy mila mividy milina avy Japana (HUF / JPY).
EGP Ejiptiana Pound
(Oh, EGP / USD) http://en.wikipedia.org/wiki/Egyptian_pound
LYD Libyana Dinar http://en.wikipedia.org/wiki/Libyan_dinar
XAF Afrika Afovoany Franc http://en.wikipedia.org/wiki/Central_African_CFA_franc
Eoropa Atsinanana Currencies:
ALL albaney Lek http://en.wikipedia.org/wiki/Albanian_lek
BGN biolgara Lev http://en.wikipedia.org/wiki/Bulgarian_lev
HUF hongariana Forint http://en.wikipedia.org/wiki/Hungarian_forint
PLN Anarana Zloty http://en.wikipedia.org/wiki/Polish_Zloty
RUB Federasiona Rosiana
Near Eastern Far Ary Currencies:
CNY Sinoa New Yuan
na Renminbi Angamba iray amin'ireo vola matanjaka
tsiroaroa; Na izany aza, tsy omen'ny ankamaroan'ny mpampindram-bola.
IDR indonezianina Rupiah http://en.wikipedia.org/wiki/Indonesian_rupiah
KRW Won Koreana http://en.wikipedia.org/wiki/South_Korean_won
MYR Maleziana Ringgit http://en.wikipedia.org/wiki/Malaysian_ringgit
PHP Filipina Peso http://en.wikipedia.org/wiki/Philippine_peso
TWD New Taiwanais Dollar http://en.wikipedia.org/wiki/New_Taiwan_dollar
VND Vietnamiana Dong http://en.wikipedia.org/wiki/Vietnamese_Dong
Amerika Latina Currencies:
ARS Arzantina Peso http://en.wikipedia.org/wiki/Argentine_peso
BRL Breziliana Real http://en.wikipedia.org/wiki/Brazilian_real
CLP Shiliana Peso http://en.wikipedia.org/wiki/Chilean_peso
cou Kolombiana Real http://en.wikipedia.org/wiki/Colombian_real
MXN Meksikana Peso http://en.wikipedia.org/wiki/Mexican_peso
Afovoany Atsinanana Currencies:
AED Emirà Arabo Mitambatra
ILS Israeliana New sekely iray http://en.wikipedia.org/wiki/Israeli_new_
Iqd Irakiana Dinar http://en.wikipedia.org/wiki/Iraqi_dinar
IRR Iraniana Rial http://en.wikipedia.org/wiki/Iranian_rial
KWD Koetiana Dinar http://en.wikipedia.org/wiki/Kuwaiti_dinar
SAR Saudi Arabia riyal http://en.wikipedia.org/wiki/Saudi_riyal
ANDRAMO Tiorka Lira http://en.wikipedia.org/wiki/Turkish_lira
Lafiny ratsy To Trading The Exotics:
Ny ankamaroan'ireo ny vola hafakely tsiroaroa manana niely avo dia avo. Raha ianao no handoa ny pips 2 iray lomisy tahaka EUR / USD, dia mety ho hitanao fa mandoa ny fihanaky ny 200 pips in hafakely tsiroaroa izay tsy ranon-javatra toy ny USD / MXN, CZK / JPY sy AUD / MXN. Marina fa samy mety manao kajy ny pip ihany 1 / 10 ny zavatra hafa rehetra; nefa na dia 1 / 10, ny pip niely mbola avo. Rehefa midina ianao 200 pips avy ny hatao mandeha mahatonga mametraka ny mahasoa ara-barotra tena zava-tsarotra.
Hantsana lalina manjaka # 2: hafahafa ny Trading
Rehefa tsy varotra vola be, dia mirona hifindra erratically. A ambany liquidity matetika dia midika fa, ankoatra ny fananana lafo vidy kokoa niely, ny vola mpivady tsy mamaly ny fanadihadiana ara-teknika tsara. Araka izany, noho ny ambony sy ny fanapariahana vola raharaham-barotra tsy ara-teknika mifanaraka discoverability, indrindra vola vahiny tsiroaroa tsy mahasoa ny varotra.
Base Sandam-bola sy ny Quote Sandam-bola
Ampandehano ary mangataka Prices
Eoropa Atsinanana Currencies
Amerika Latina Currencies
Minor Ny tsiroaroa